MIUI 10 | အပါအဝင် MIUI အတွက် themes များကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ Androidsis
မတူညီတဲ့လူမှုကွန်ယက်တွေ၊ ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များနဲ့ YouTube ချန်နယ်တစ်ခုမှတဆင့်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိရင်ငါ့ကိုဘယ်လောက်မေးကြလဲ MIUI တွင်အခင်းအကျင်းများထည့်သွင်းပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသော Themes လျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထဝီဝင်နယ်မြေနှင့်မကိုက်ညီတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပေါ်လွင်နေသောလျှောက်လွှာသို့မဟုတ်အကန့်အသတ်ရှိသည့်အကြောင်းကြားစာပြီးနောက်၊ ဒီနေ့လက်တွေ့ပြသတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုငါပြမယ် ၏လျှောက်လွှာနှင့်အတူပုံမှန်ပြန်သွားဖို့ဘယ်လို Xiaomi Themesအပြင်မှအခင်းအကျင်းများကိုပြင်ပမှကူးယူရန်မလိုအပ်ဘဲ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုခဲ့သကဲ့သို့၎င်းကိုထပ်မံအသုံးပြုနိုင်သည် MIUI အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုတရားဝင် download လုပ်ပါ.
စောင့်ကြည့်ဖို့သင့်ကိုအကြံပေးတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ ၎င်းသည် MIUI10 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနှင့်ယခင်ဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်မှန်ကန်သည် ပေါ်ပြူလာတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဆိပ်ကမ်းအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်လာသောစိတ်ကြိုက်အလွှာ၏။
1 Trick သည် MIUI မူကွဲအားလုံး၊ MIUI 10 အားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်
Trick သည် MIUI မူကွဲအားလုံး၊ MIUI 10 အားလုံးအတွက်မှန်ကန်သည်
CM Fake theme သည် MIUI6နှင့် Mi10 တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်
နိုင်ရန်အတွက်လိုက်နာရန်လှည့်ကွက် MIUI themes များကို download လုပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi terminal တွင်ထည့်သွင်းပါ အခင်းအကျင်းသိုလှောင်မှုကို MIUI အပြင်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက desktop ပေါ်၌ထပ်မံသက်ဝင်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ချိန်ညှိချက်များကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ စနစ်နှင့်စက်အပိုင်းသို့သွားခြင်းနှင့်ထပ်မံချိန်ညှိချက်များရွေးစရာကိုထည့်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့သာနှင့်အတူလောက်ပေလိမ့်မည် Region option ကိုနှိပ်ပြီးဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းမဟုတ်သောဒေသတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါဗွီဒီယိုတွင်ပြသောလက်တွေ့ဥပမာတွင်ဒေသကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် တောင်ကိုရီးယား, ပါဝါ option ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သက်ဝင်ခဲ့ကတည်းကငါ့အဘို့ပြanyနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသ ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော Themes application မှ MIUI themes များကို download လုပ်ပါ ဒါကကျွန်တော့် Android ၏အဓိက desktop ပေါ်မှာထပ်မံပေါ်လာသည်။
ငါတို့သုတ်သင်ပြီးတာနဲ့ Xiaomi ၏တရားဝင် Themes စတိုး ကျွန်တော်တို့လိုသလောက်သီချင်းတွေကူးယူတာ၊ (ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာများ၊ နောက်ခံပုံများနှင့်ဖုန်းမြည်သံများ)ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi ၏ချိန်ညှိချက်များသို့ပြန်သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏စပိန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ကန်သောဒေသကိုပြန်လည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တရားဝင် Themes App မှ MIUI6မှဆောင်ပုဒ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း
ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Themes application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi ၏အဓိက desktop မှပျောက်ကွယ်သွားမည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ချိန်ညှိချက်များအတွင်းတွင်ထိုရွေးစရာဆက်ရှိနေ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သော themes များကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲ။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဤရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အခင်းအကျင်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည့်အချိန်တွင်အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဒါက h ရှိဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါတယ်အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်ပြီးပထဝီဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များမရှိပါက Xiaomi themes များကိုအသုံးပြုသည် ငါတို့အကြိုက်ဆုံး MIUI themes များ download လုပ်ပါ။
မှတ်စု: လျှောက်လွှာတွင်ပါသော themes များပေမယ့် သူတို့ကို MIUI 10 မှဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ MIUI ဗားရှင်းနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းသတိပြုမိသည် MIUI 10 အလွှာကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ဗွီဒီယိုတွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းသူတို့သည် MIUI 10 အတွက်လုံးဝတရားဝင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဆန့်ကျင်ပေါ်ပေမယ့်ဂဏန်းတွက်စက်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့၏စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ၊ အိုင်ကွန်များ၊ ဆက်တင်များ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်နာရီအက်ပ်ပေါ်တွင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » MIUI 10 အပါအဝင် MIUI အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Maricarmen Casabella ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ဆောင်းပါးကောင်း၊ ငါသငျသညျ, သငျသညျဒေသတွင်းကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ, မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးရန်ကျွန်တော်တို့ကို miui20 မှ update လုပ်ဖို့လည်းတရားဝင်ပါသလား ကျွန်ုပ်ဖုန်းသည် Mi Max ၂ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တည်ငြိမ်သော miui2ကို OTA မှတဆင့်မရရှိသေးပါ။
Maricarmen Casabella အားစာပြန်ပါ
Apple Music သည် Android Auto နှင့်အဆင်ပြေသည်